संसार नै आतंकित भएको दिन : सेप्टेम्बर ११ | रक्त न्युज
संसार नै आतंकित भएको दिन : सेप्टेम्बर ११
सेप्टेम्बर ११, अर्थात् १९ वर्षअघि आजकै दिन। अमेरिका मात्रै होइन, संसार नै आतंकित भएको दिन। यो दिन अमेरिकामा यस्तो घटना हुन पुग्यो, जसको कसैले कल्पना पनि गरेको थिएन।
अमेरिकाको इतिहासमा सबैभन्दा खतरनाक दिन। एउटा कालो दिन। आतंककारीको हमलामा न्युयोर्कको इज्जत मानिने वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर क्षणभरमै खरानी भयो। अलकायदाले गरेको आतंककारी हमलामा सयौं निर्दोषको ज्यान गयो।
के भयो त्यो दिन ? त्यतिविघ्न भयावह, कहालीलाग्दो घटना कसरी भयो ? मानिसहरू प्रश्नहरूले घेरिए। आतंककारीहरूले उक्त घटनालाई आफ्नो इतिहासमै ठूलो सफलता माने। निर्दोष मानिस मारिने, आतकंकारीले नै दोषी ठानेका कसैलाई केही पनि नहुने ! यो कस्तो सफलता हो ?
महाशक्ति अमेरिका, जो संसारको नजरमा सबैभन्दा शक्तिशाली पनि छ। तर उसकै गौरवमाथि अकल्पनीय हमला ! अमेरिकाका कतिपय मानिस अहिले पनि २००१ को सेप्टेम्बर ११ को उक्त दिन सम्झेर झसङ्ग हुन्छन्। सारा अमेरिका त्यो दिन डरले कामेको थियो। परबाट हेर्ने र देख्ने अनि सुन्नेहरु अचम्म मान्दै कान ठाडा पारिरहेका थिए।
अलकायदाले चार वटा यात्रु विमान अपहरण गरेका थिए। तीमध्ये दुई विमान लगेर आतंककारीले न्युयोर्कको व्यस्त शहरस्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमाथि ठोक्काइदिएका थिए। तेस्रो विमान पेन्टागन र चौथोलाई जंगलमा खसालिदिएका थिए।
उक्त दिन बिहान ८:४६ बजे अमेरिकी एअरलाइन्सको फ्लाइट ११ वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरको नर्थ टावर र दोस्रो फ्लाइट ९:०३ बजे साउथ टावरमा ठोक्कियो। यो भयावह हमलामा विमानमा रहेका यात्रुसहित अन्य गरेर २९७४ जनाको मृत्यु भयो। आर्थिक नोक्सानीको त अनुमान नै गर्न कठिन छ।
मृत्यु हुनेमा ३४३ फायर विभागका कर्मचारी र ६० प्रहरीसमेत थिए। ७० देशका निर्दोष नागरिकका साथै १९ आतंककारी पनि यसमा परेका थिए।
तिनै १९ जना अलकायदाका आतंकारीले विमान अपहरण गरेका थिए। यिनले पाइलट तालिम पनि गरेका थिए। हमलाको योजना १९९६ देखि नै बनाउन थालिएको बताइन्छ।
तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसले अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन र संगठनको अन्त्य गर्ने प्रण गरेका थिए। यस क्रममा कतिपय निर्दोषको समेत ज्यान गयो। बुसको पालामा यो काम सम्पन्न हुन सकेन।
त्यसपछिका राष्ट्रपति बाराक ओबामा प्रशासन लादेनलाई खोज्न सफल भयो। २०११ मे महीनाको रात लादेन मारिए। अमेरिकाले ‘९-११’ मा लागेको आफ्नो घाउमा मह्लमपट्टी लागेको अनुभूति गर्‍यो।
अघिल्लो लेखमाभारत‍-चीन सीमामा तनाव कम गर्न दुई विदेशमन्त्रीबीच सहमति
अर्को लेखमाअरे यार, पुरुषलाइ लाजै लाग्दैन ?